5-atoore oo Bollywood-ka caan ka ah kuwaas oo shaqada u joojiyeen inay caruurtooda waqti la qaataan (+sawiro) – Filimside.net
5-atoore oo Bollywood-ka caan ka ah kuwaas oo shaqada u joojiyeen inay caruurtooda waqti la qaataan (+sawiro)
Bollywood-ka waa shirkad loolankeeda aad u sareeyo haddii jilaaga dhowr filim Flop ka noqdaan masii socon karo iskaba dhaaf inuu shaqadiisa hakad galiyo.
Balse waxaan idiin heynaa 5-atoore oo caan ah kuwaas oo shaqadooda filim jilista hakad galiyeen si ay waqti ula qaataan caruurtooda oo ifka ku cusbaa si ay xaasaskooda garab u siiyaan.
1. Imran Khan: Jilaagaan 34-jirka ah waa midkii ugu horeeyay shaqadiisa oo meel wacan mareyso joojiyo si uu waqti dheeraad ah ula qaato xaaskiisa Avantika Malik markii dambena u dhashay gabar lagu magacaabo Imara Malik Khan oo haatan afar jir ah.
Waxaana dhacday Imran inuu iska nin noqday nin qoys shaqada Bollywood-ka uusan weli dib ugu soo laabanin.
2. Vivek Oberoi xidigaan asigoo loo baahan yahay ayuu shaqada filim jilista joojiyay wuxuuna bilaabay inuu waqti la qaato xaaskiisa Priyanka Alva asigoo sheegay shaqada inuu ka jeclaaday guriga.
Waxaana u dhashay wiil lagu magacaabo Vivaan oo haatan 5-jir ah inta badan Vivek ma shaqeeyo ee reerkiisa ayuu waqti la qaataa sidoo kalena waxaa u joogto gabbar lagu magacaabo Ameyaa Nirvana Oberoi.
3. Kunal Khemu iyo xaaskiisa Soha Ali Khan waxaa u joogto gabar lagu magacaabo Inaaya Naumi Khemu oo dhalatay sanadkii hore 2017, xidigaana weli shaqada toos ugama soo laabanin wuxuuna filim jilista hakad galiyay markii Soha ay uur yeelatay, kaliya filimkii Golmaal Again ayuu wax ka jilay.
4. Shahid Kapoor xidigaan shaqadiisa sedex bilood ayuu hakad galiyay markii xaaskiisa Mira Rajput u dhashay Musha Kapoor sanadii 2016, haatana Shahid shaqada fasax kale ayuu ka qaadan doonaa sedex bilood oo kale madaama xaaskiisa Mira uur leedahay dhawaana uu mar labaad aabo noqon doono.
5. Saif Ali Khan inkastoo mashquulkiisa aad u sareeyo haddana Saif hal bil ayuu filim jilista joojiyay markii xaaskiisa Kareena Kapoor Khan u dhashay wiilka loo bixiyay Taimur Ali Khan 20-kii Dec 2016.
Waxaa Aqrisay 2,199
kunnal khemu xaskiisa sara ali khan gabadhi manay ahayn saif ali khan dhalay ee iminkana sushant singh rajput flimka la soo wadda wll sakariye
Soha Ali Khan ayaan ka wadnay Saif Ali Khan walaashisa waan saxnay walal